Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay Mareykanka:-(Sawiro) – hareerley News
Magaalada Taariikhiga ah ee Philadelphia ee dalka Mareykanka waxaa shaley galab ilaa xaley ka socdey toogasho iyo weerar dhex marey dabley hubaysan iyo ciidmada Booliiska dalkaas oo isku dayaya inay ka hortagaan kooxaha weerarka soo qaaday
Maxkamadda ICJ oo markale dib udhigtay dhageysiga dacwadda Badda Soomaaliya iyo Kenya.
Posted on May 19, 2020 May 19, 2020 Author Hareerley News
Garsoorka maxkamadda caddaaladda Caalamiga ah ee ICJ ayaa ku dhawaaqay in mar kale dib loo dhigay waqtiga dhageysiga dacwadda muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. War maanta kasoo baxay maxkamadda uu fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherlands ayaa lagu sharraxay sababta dib u dhigista iyo waliba jadwalka dhageysiga kiiska. Warqad loo diray […]
Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Barakeysan Ee Somaliland Oo maanta daahfurey shirka dib u hubinta tirada Qaxootiga:(Daawo)
Posted on January 25, 2020 January 25, 2020 Author Hareerley News
Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Barakeysan ee Somaliland Mudane, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) ayaa maanta daaf-furay shirka dib u hubinta tirada Qaxoontiga ka diiwaan gashaan Jamhuuriyadda Somaliland. Halkan hoose ka (Daawo)
Xusulduub iyo loolan durbaba ku Bilowdey Jagadii Eng Yariisoow iyo Mas’uuiyiin Villa Soomaliya Buux dhaafiyey .
Xafiiska Madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay buux dhaafiyeen qaar ka mid ah Beelaha daga magaalada Muqdisho iyo Siyaasiin doonaya in loo magacaabo Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho. Ilaa Todobo qof oo siyaasiin ah islamarkaana hadda ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qaarkood laga qabtay CV-yo waxayna la kulmeen […]
Trump: Waa in aan kulan gaar ah la yeeshaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping